MOFON’AINA TALATA 03 SEPTAMBRA 2019 – Athis Fanantenana
Mandehàna any amin’izao tontolo izao ianareo, ka mitoria ny Filazantsara amin’ny olombelona rehetra [Marka 16 :15]
Cellule de prière 28 febroary
Katekomena 1 martsa
Notre Dame de l’Air
Faritany Afovoany Andrefana
Antoko mpihira Hosana – Ambohijatovo Fitiavana
Sary sy Feo
MOFON’AINA TALATA 03 SEPTAMBRA 2019
3 septambra 2019
26 Fa hevero ny fiantsoana anareo, ry rahalahy, fa tsy firy no olon-kendry araka ny nofo, tsy firy no olona mahery, tsy firy no avo razana; 27 fa ny adala amin’izao tontolo izao no nofidin’Andriamanitra hampahamenatra ny hendry; ary ny malemy amin’izao tontolo izao no nofidin’Andriamanitra hampahamenatra ny mahery; 28 ary ny iva razana amin’izao tontolo izao sy izay fanevateva no nofidin’Andriamanitra, dia ny atao ho tsy misy aza, mba hahafoana ny misy, 29 mba tsy hisy nofo hahazo mirehareha eo anatrehan’Andriamanitra. 30 Fa avy aminy no nanaovana anareo ho ao amin’i Kristy Jesoa, Izay nataon’Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika, 31 mba ho araka ny voasoratra hoe: « Izay mirehareha, aoka Jehovah no ho reharehany » (Jer 9:23)
1 KORINTIANA 1 : 26-31
KRISTIANINA NAMPIRAISIN’ANDRIAMANITRA TAMIN’I KRISTY
Ny and faha-30 amin’izao mofonaina izao dia ilazan’i Paoly hoe: « fa nataon’Andriamanitra tafaray amin’i Kristy ianareo, ka dia i Kristy no FAHENDRENA avy Aminy ho antsika, Kristy no andraisantsika ny FAHAMARINAN’Andriamanitra ary ny FANAFAHAN’Andriamanitra antsika amin’ny fahotana » DIEM. Avy amin’izao andininy izao no ahitantsika fa asan’Andriamanitra ny mampiombona ny kristianina amin’i Jesoa Kristy Zanany. Ary izany fiombonana izany dia miteraka tombontsoa mandrakariva ho an’ny kristianina. Ireto izany tombontsoa izany
« Kristy no hery sy FAHENDREN’ANDRIAMANITRA »
Eo amin’ny and 24 dia ambaran’i Paoly fa Kristy no hery sy fahendren’Andriamanitra. Ao amin’i Kristy avokoa arak’izany ny Herin’Andriamanitra sy ny fahendreny. Noho izany, rehefa tafaray amin’i Kristy isika dia tonga manana io hery sy fahendren’Andriamanitra io. Izay tafaray marina amin’i Kristy no itoeran’ny fahendreny, izany hoe ny fiombonana sy ny firaisana tanteraka amin’i Jesoa Kristy no mampahendry ny kristianina. Izay mbola tsy ao amin’i Kristy dia mbola tsy hanam-pahendrena velively. Izany no mahatonga antsika fiangonana mitory an’i Kristy mba hiombona Aminy avokoa ny olona rehetra ka ho afaka amin’ny toe-panahy adaladala rehetra mamatotra azy.
Noho ny fahendren’Andriamanitra azon’ny mino amin’ny firaisany amin’i Kristy dia ho tonga olo-marina izy, ho tonga olona manao ny marina izy. Te hampianatra antsika Paoly fa matoa ny olona efa tonga amin’ny sehatry ny fahamarinana dia vokatry ny firaisany amin’i Kristy izany. Izay rehetra tsy mbola ao amin’ny Tompo, ao amin’i Jesoa Kristy dia tsy mahagaga raha toa ka mbola tsy mahay manao ny marina. Ny mampalahelo eto amin’ny firenentsika dia ny mahita fa tena te hiady amin’ny endriky ny tsy fahamarinana tokoa ny MALAGASY, te handresy ny endriky ny kolikoly samihafa. Tsy mba hita ao amin’izay programa samihafa ho enti-miady amin’ny tsy fahamarinana mihitsy anefa ny ezaka hampiombona ny olona amin’i Kristy. Asa sy andraikitsika fiangonana izany!
Ny tapany farany amin’ny and 30 io dia milaza mazava Paoly fa « Kristy no andraisantsika… ny FANAFAHAN’Andriamanitra antsika amin’ny fahotana ». Noho ny amin’ny fiombonana amin’i Kristy arak’izany dia tonga tsy manana hery amintsika intsony ny fahotana. Izay ilay herin’Andriamanitra ao amin’i Kristy Jesoa. Ny hoe afaka amin’ny fahotana dia ho enti-milaza fahamasinana. Ny olona tafaray amin’i Jesoa Kristy arak’izany dia miverina amin’ny fahamasinana. Koa raha miteny isika amin’izao volana izao manao hoe « manompoa ny Tompo amin’ny fahamasinana », dia mitaky ezaka be dia be amintsika izany mba ho tafaray marina amin’i Kristy. Na raha ny marimarina kokoa mila manaiky isika hampiraisin’Andriamanitra amin’i Kristy.
Ho an’Andriamanitra irery ihany ny voninahitra.
MOFON’AINA ZOMA 06…
Mana isan'andro (5)
Vakiteny isan'andro (1)
Safidio Amosa (6) Apokalispsy (17) Asan’ny Apostoly (23) Daniela (6) Deotoronomia (13) Efesiana (12) Eksodosy (13) Estera (3) Ezekiela (3) Ezra (1) Filipiana (4) Fitomaniana (2) Galatiana (6) Genesisy (6) Habakoka (1) Hebreo (7) Hosea (2) I Jaona (9) I Korintiana (10) I Mpanjaka (2) I Petera (8) I Samoela (6) I Tantara (2) I Tesaloniana (5) I Timoty (7) II Korintiana (12) II Mpanjaka (5) II Petera (5) II Samoela (2) II Tantara (5) II Tesaloniana (4) II Timoty (4) Isaia (23) Jakoba (5) Jaona (35) Jeremia (14) Joba (7) Joda (1) Joela (1) Jona (1) Josoa (7) Kolosiana (4) Levitikosy (3) Lioka (34) Malakia (1) Marka (22) Matio (34) Mika (1) Mpitoriteny (2) Mpitsara (2) Nehemia (2) Nomery (4) Ohabolana (9) Romana (14) Salamo (28) Titosy (5) Zakaria (3) Zefania (2)
febroary 2020 (11)
janoary 2020 (20)
desambra 2019 (7)
novambra 2019 (11)
oktobra 2019 (6)
septambra 2019 (12)
aogositra 2019 (9)
jolay 2019 (4)
jona 2019 (3)
aprily 2019 (4)
janoary 2019 (3)
desambra 2018 (14)
novambra 2018 (10)
oktobra 2018 (15)
septambra 2018 (19)
aogositra 2018 (16)
jolay 2018 (3)
jona 2018 (20)
aprily 2018 (13)
martsa 2018 (15)
febroary 2018 (13)
janoary 2018 (18)
desambra 2017 (15)
novambra 2017 (17)
oktobra 2017 (16)
septambra 2017 (17)
aogositra 2017 (17)
jolay 2017 (6)
jona 2017 (18)
aprily 2017 (16)
martsa 2017 (20)
febroary 2017 (12)
janoary 2017 (18)
desambra 2016 (14)
novambra 2016 (12)
febroary 2016 (1)
janoary 2016 (11)
desambra 2015 (1)
Andraikitra Antso Asam-pinoana Asan'Andriamanitra Faharetana Fahasoavana Fahatokisana Fahazavana Famonjena Fanafahana Fandovana Fandringanana Fanekena Fanetre-tena Fankalazana Fankasitrahana Fankatoavana Fanompoana Fiadanana Fiangonana Fibebahana Fiderana Fihainona Fihavanana Filazantsara Finoana Fiombonana Fitarihina Fitiavana Fitondran-tena Fitoriana Fitsinjovana Mpamelona Mpamonjy Mpampihavana Mpanafaka Mpandresy Mpiaro Mpihaino Mpitahy Mpitantana Mpitarika Soratra Masina Teny Fiainana Vavolombelona
Jereo ny tranokala feno	Jereo ny tranokala maivana
Eglise Saint Denis - Place de l'Eglise - Athis-Mons
06.52.53.22.56 (Mpitandrina) / 06.41.84.95.81 (Filoha)
© 2020 Athis Fanantenana